Sancerre, uthando lokubaleka eParis | Iindaba Zokuhamba
Sancerre, uthando lokubaleka eParis
UMariela Carril | | Indawo yokubaleka, Ezothando
IParis inesihloko sesona sixeko sithandwayo emhlabeni kodwa kwiindawo ezingqongileyo kukho iindawo ezininzi ezinokuba yindawo yokubaleka. Ngaba yiyo yonke into EFransi ngummangaliso wembonakalo yomhlaba, inkcubeko kunye neencasa!
Ukuba useParis neqabane lakho kodwa ufuna umbono obanzi, indalo, iwayini elungileyo kunye nexesha lokuzikhathaza ngokokukhetha iindlela zothando ezivela eParis es UmdanisiNgaba uvile ngale ndawo ye izidiliya, iinduli kunye neelali zamaxesha aphakathi?
Umdanisi ngu indawo ebekwe kwiNtlambo yaseLoire, kwicala lasempuma, kwaye kunjalo ntonye newayini emhlophe nangona kunjalo ezinye iintlobo zenziwe. Konke, kufanelekile kwaye ungazibandakanya zonke ekubalekeni kwakho kwezothando ...
Ummandla uphawulwe Iidolophana zakudala, amasimi ahonjiswe ngeentyatyambo zasendle nezidiliya. Ukuba unomfanekiso wothando welizwe laseFrance emva koko iSancerre iya kukufanela njengeglavu. Kukho iivenkile ezivula iingcango zazo zifuna ukwazi, izindlu ezinomtsalane zeendwendwe apha naphaya, iifama ezenza itshizi, iinkomo ...
Ukuba uqesha imoto uwedwa iiyure ezimbini ukusuka eParis kwaye into elungileyo kukuba azikaze zibekho kubakhenkethi abaninzi njengakwezinye iindawo ezijikeleze ikomkhulu laseFrance. Ingakumbi ukuba uya ekupheleni kwehlobo okanye kwelinye ixesha lonyaka ngqo. Kwelinye icala, ukuba sowuyazi intshona yeLoire, kunye neenqaba zayo ezidumileyo, lixesha lokuba ubheke empuma kwaye ufumanise le mihlaba kunye neendawo zabo zakudala ezinje ngeQuincy, Menetou-Salon okanye Reuilly. Okanye ngokucacileyo, uSancerre ngokwakhe.
Ukongeza kule ndawo I-Sancerre yona ilali yakudala eyakhiwe phezu kwenduli ejonge kuMlambo iLoire. NgamaCeltic namaRoma adlulileyo (eneneni igama livela ku «ngcwele kuKesare », ISaint-cere, iSancerre), ibine-abbey yayo ka-Agasti, inqaba yayo kunye neendonga zayo ekuhambeni kwexesha.
Kukule ndawo apho iivenkile zewayini ezininzi, iivenkile zokutyela kunye neehotele zigxile, ezenza i Iindlela zewayini onokuyilandela kwimpelaveki yakho yothando.
Ungazinza elalini kwaye uzinikele ekwazini ezinye zezakhiwo zomfuziselo: I-Bell tower yaseSt.Jean ukusuka kwinkulungwane ye-XNUMX, inqaba yokugqibela yamaXesha Aphakathi yenqaba (zazintandathu), amabhodlo ecawa atshabalaliswa ngamaNgesi kunye nezinye izindlu ezindala nezembali eziye zenziwa iihotele okanye iivenkile zokutyela. Inethiwekhi yayo ye izitrato ezinamatye Kuluyolo ukulahleka ukuhamba nokuthatha iifoto.
Kujikeleze isikwere esikhulu zininzi ikofu kunye neeresityu kwaye kubo ungangcamla i iwayini emhlophe yalapha, ICrottin. Eyona ndawo ithandwayo yokutyela yiLa Tour imenyu yayo igcwele iimveliso zalapha ekhaya, iintlanzi ezininzi kunye newayini emhlophe, ngokucacileyo, zonke zikhonza kwindawo enomtsalane enje ngenqaba yamaxesha aphakathi eneembono ezintle.
Kukho i- IMaison des Sancerre, un museum yeyangoku kwaye inomdla kakhulu kwitekhnoloji yale mihla ene holograms nayo yonke into ebonisa ukulinywa komdiliya, isivuno sawo njalo njalo. Nazi izidiliya ezinkulu kunye nezinye ezingathobekanga kakhulu ukuba zingatyelelwa kwaye kungcono ukuba wazi kwangaphambili ukuba yeyiphi onomdla wokuhamba kuyo. Ukuba awunalo uluvo oluninzi ke into elungileyo kukuya kwangoko kwisikwere esikhulu kwaye ubuze e-Aronde Sancerroise, umbutho omele malunga nezidiliya zalapha ezingamashumi amabini kwaye ezinokukucebisa kwaye zilungiselele ukhenketho.
Kufuneka kuthiwe i-Sancerre inobuso obubini: enye ehlotyeni kunye nobunye ebusika. Ehlotyeni inokhenketho kuba baninzi abantu baseParis abanendlu yasehlotyeni apha kodwa inyani yile yokuba ngaphandle kweli xesha lonyaka, njengoko benditshilo apha ngasentla, indawo izolile kakhulu. Ubuhle busekhona kwaye ungabonwabela bodwa xa uwedwa. Ke zininzi ezinye izinto ezingahambelani newayini okanye itshizi yebhokhwe emnandi kangangokuba yenziwa kufutshane (eyona ilungileyo iseChavignol).
Ndiyathetha ukuhamba ngebhayisikile, kukho indlela entle ebonisa indlela kaloliwe endala, okanye a ukukhwela iphenyane emlanjeni ukuya kutyelela iziqithi ezincinci zaseLoire. Unako nokuhamba ngebhayisikile nakwezinye iidolophana ezikufutshane, Ngamandla, unikwe ityala. Ukuba unemoto eqeshisayo ungaya phambili, ukuya Guedelon, umzekelo, iyure nje kude, ukubona ukuba inqaba yakhiwe njani ngobuchule bamaxesha aphakathi. Unjani!?
Bourges Ikwasinika netempile emnandi yama-Gothic yamaxesha aphakathi, enomtsalane ngaphandle kodwa eyothusayo ngaphakathi ngamahlathi kunye neenkonzo ezibonakala ngathi ziqwengwe. IBourne Kusondele kakhulu, ukuba unomdla kwiiceramics eziveliswe apha ubuncinci iminyaka eliwaka. Njengoko ubona, kuninzi ekufuneka uphonononge kwaye nangona sithetha ngeempelaveki, ungonwabela ngokulula iintsuku ezine okanye nangaphezulu apha.
Uhlala phi- Zininzi iindlela onokukhetha kuzo kwaye zonke zixhomekeke epokothweni yakho. Ihotele iLe Panoramic inamagumbi asuka kwi-euro ezingama-55 kunye neembono ezintle, iLa Chanelière yihotele entle kakhulu eqala ngenkulungwane ye-2006 kwaye inamagumbi asibhozo kuphela ajonge emaphandleni. Kukho iChâteau de Beuajeu, ejonge umlambo iSauldre nakwinkulungwane ye-XNUMX. I-Moulin des Vrieres yi-B & B ukusukela ngo-XNUMX kunye nokunethezeka kukho i-Prieurè Notre-Dame d'Orsan monastery, ihotele ethengisa izinto ezirhangqwe zizitiya, imithi yeziqhamo, izidiliya kunye neerose bush.
Apho ukutya: I-Esplanade lukhetho oluncinci nolunencasa kwindawo ephambili, efanayo ne-L'Ecurie. Kwisidlo sangokuhlwa esinobunewunewu kukho iAuberge de La Pomme d'Or kwindawo yasePa de la Mairie kunye nale ndibize ngayo ngasentla, indawo yokutyela yaseLa Tour (eneenkwenkwezi zaseMichelin).
Yintoni yokutya: itshizi yebhokhwe (enye yezona zinto zintle zenziwa yifama yaseChèvrerie des Gallands) kunye newayini yendawo. Iwayini emhlophe yinto yakudala (Domaine Gérard Boulay okanye uSébastien Riffault, umzekelo, zizidiliya ezibini ezihle kakhulu), kodwa ungangcamla iwayini zanamhlanje ngu-Alexandre Bain oguqule iwayini yakhe yaya kwi-biodynamics ngo-2004. Ilandelwa yi-Domaine UPaul Cherrier, oneehektare ezili-14 zokulima eziphilayo kunye namaxabiso afikelelekayo kakhulu kwiibhotile zewayini, iDomaine Pascal et Nicolas Reverdy enikezela utyelelo olufundisa kakhulu kubuchwephesha bezolimo kunye neDomaine Martin eChavignol.
Iidolophana zokwazi: phakathi kwabaninzi, iMenetou-Salon, iChavignol, iMaimbray, iChaudoux, iBourges, iLa Bourne, iPouilly, iVerdigny.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Indawo yokubaleka » Sancerre, uthando lokubaleka eParis
Iziqithi ezintle zaseYurophu ukuthatha uhambo
Xian, ukhenketha isixeko saseTshayina samajoni aseTerracotta